LOVELIKING H110 Cordless Handheld Car Vacuum Cleaner 6000Pa 4000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ
LOVELIKING သည် ဤလက်ဖုန်စုပ်စက်ကို 2020 ခုနှစ်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ 6000Pa စုတ်ယူနိုင်သောပါဝါနှင့် 2*2000mAh ကြာရှည်စွာ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများဖြင့် H110 ဖုန်စုပ်စက်သည် ဖုန်မှုန့်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမွေးများ၊ သဲများ၊ ဆိုဖာ သို့မဟုတ် ကူရှင်ရှိ အညစ်အကြေးများကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သေနေသောထောင့်ကို သန့်ရှင်းရန် အခေါင်းပေါက်ကိရိယာများလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။ အဲဒါ’ကား၊ ရုံး၊ အိမ်သုံး။
ပါဝါ၊ အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်း၊ စစ်ထုတ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို သင့်တောင်းဆိုချက်များအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲလိုပါသည်။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေပါ။
ထုတ်ကုန်အမည် : H110 Mini ကားလက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်
Aလျှောက်လွှာ: လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်သည် ကားနှင့် အိမ်သုံးပရိဘောဂများ၏ အတွင်းအပြင် မျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။
စစ်ထုတ်ခြင်း- PP၊ HEPA၊ Stainless steel ရွေးချယ်မှုများ
မော်တာ bအလျင်စလို motor , 32000±10%rpm
ပါဝါနှုန်း 7.4V၊ 70W
အလုပ်ချိန် : မြန်နှုန်းမြင့် setting တွင် > 15 မိနစ် ; အနိမ့်အမြန်နှုန်းသတ်မှတ်မှုတွင် မိနစ် 30 ကျော်
ဘက်ထရီ 7.4V 2*2000mAh 5C Li-ion ဘက်ထရီများ
အားသွင်းချိန် ၂.၅±0.5 နာရီ (5V 2A AC Adapter)
အသံအဆင့် <75 dB
Dustbin စွမ်းရည်- 150ml
အားသွင်းပေါက်- USB အမျိုးအစား-C
အလေးချိန် ၉၀၀ ဂရမ်
မော်တာဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း- ＞500 သံသရာ (မိနစ် 30 လှည့်ပါ၊ မိနစ် 30 ရပ်တန့်ပါ၊ သံသရာတစ်ခု) သို့မဟုတ် 100H ထက်ပိုသည်
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ Ergonomic အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်း၊ ပေါ့ပါးပြီး ကိုယ်ထည်သေးငယ်ပြီး လူအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည်။
LOVELIKING သည် ဤလက်ဖုန်စုပ်စက်ကို 2020 ခုနှစ်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ 6000Pa စုတ်ယူနိုင်သောပါဝါနှင့် 2*2000mAh ကြာရှည်စွာ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများဖြင့် H110 ဖုန်စုပ်စက်သည် ဖုန်မှုန့်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမွေးများ၊ သဲများ၊ ဆိုဖာ သို့မဟုတ် ကူရှင်ရှိ အညစ်အကြေးများကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သေနေသောထောင့်ကို သန့်ရှင်းရန် အခေါင်းပေါက်ကိရိယာများလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။ ကား၊ ရုံး၊ အိမ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. 6000Pa ပြင်းထန်သော စုတ်ယူမှုပါဝါ2ဆက်တင်များပါရှိသော ဖုန်မှုန့်များကို သန့်စင်ပေးပါသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်။ သဲ ကြောင်အမှိုက်။ ဆိုဖာများနှင့် မွေ့ယာများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ဝှက်ထားရခက်သော အမှုန်အမွှားများ လည်းဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်နှင့် ကား၏ ထောင့်အားလုံးအတွက် ပတ်လည်ကာကွယ်မှုပေးသည်။
2. ကြာရှည်အသုံးခံရန်အတွက် 2*2200mAh ဘက်ထရီ။ 6000Pa မြန်နှုန်းမြင့်မြင့် 15 မိနစ်။
3. ergonomics လက်ကိုင်ဖြင့် ကျစ်လစ်သော ဒီဇိုင်း။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခံစားမှုဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။
4. အပိုပစ္စည်း : အခြေခံ။ ဖြီး။ ပရိဘောဂများကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်ရန်အတွက် nozzles များ
5. အသံအဆင့် <70dB
5. မော်တော်ယာဥ်များအတွက်စံပြ။ အိမ် . ရုံး၊
6. OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- LOVELIKING H100 လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် 6000Pa 4500mAh မော်တော်ယာဥ်နှင့်အိမ်အတွက် HEPA Stainless Steel ဇကာ
နောက်တစ်ခု: ချစ်စဖွယ်သံလိုက် LED အလုပ်အလင်း 2500mAh 400 lumen ဓာတ်မီး ခြင်သတ်မီးအိမ်
ကားဖုန်စုပ်စက် Manuf Actur Er
လက်ကိုင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ဖုန်စုပ်စက်
လက်ကိုင် Wet Vac
Ion Vac ကြိုးမဲ့ ဖုန်စုပ်စက်
LED အလုပ်အလင်း, ကြိုးမဲ့ကား ဖုန်စုပ်စက်, အားသွင်းစားပွဲတင်မီးအိမ်, Ionvac Cordless Vacuum, Magnetic Base ဖြင့် Led Light, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် စားပွဲတင်မီးအိမ်,